ILKAAN KEENYA AKKAMITTIIN RIGANNA LAATA? -AKKAMIIN FOOLII AFAANII BADAA (HALITOSIS) ITTISNA?- “FAYYAA TAPHA SEETEE …..!” *-Fayyaan Qabeenya! Dr. Dhinsa Yonas. – Beekan Guluma Erena
ILKAAN KEENYA AKKAMITTIIN RIGANNA LAATA? -AKKAMIIN FOOLII AFAANII BADAA (HALITOSIS) ITTISNA?- “FAYYAA TAPHA SEETEE …..!” *-Fayyaan Qabeenya! Dr. Dhinsa Yonas.	Beekan Erena
HEALTH June 6, 2016OROMO
227SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
ILKAAN KEENYA AKKAMITTIIN RIGANNA LAATA?
Malli/Seerri rigannaa ilkaaanii akkaataa mataa isaa danda’e qaba. Kunis, irgi ilkaanii keenya akka hin hubamneef akkasumas, qulqullina ilkaan keenyaa sirriitti akka eegamuuf kan nu gargaarudha. Guyyaa tokko keessattis si’a lama (2) ilkaan keenya qulqulleessuun barbaachisaadha. Kanaaf, ilkaan keenya gaafa rigannu kan armaan gadii kana hordofuun faayidaa nii qabaata.
1. Nyaata nyaannee erga xumurree booda, ilkaan gidduutti wantoota hafan ilkaan gidduudhaa baasuu (fkn Haanxaa qulqullina qabu fayyadamuun).
2. Rigaa ilkaanii kan mukarraa qophaa’us ta’e kan ammayyaa ‘brush’ fayyadamuun ilkaan keenya rigachuu. Gaafa rigannus, ilkaan gara olii jiran irra keessaa gara gadiitti akkasumas kan gara gadii jiranis jalaa gara oliitti rigachuu qabna. Kunis qulqullina ilkaanii irratti dabalataan irgi ilkaanii keenya akka hin miidhamneef fayyada.
3. Rigaa ilkaanii ammayyaa ji’a sadi sadiin jijjiiruu qabna.
4. Ilkaan keenya yeroo rigannus, yoo xiqqaate daqiiqaa lamaaf (2) rigachuu qabna.
5. Ilkaan hundumaa, keessumaa lafa irgi ilkaanii fi ilkaanni keenya itti wal argu sirriitti rigachuu qabna.
6. Rigaa ilkaanii kan qulqulleessituu arrabaa qaban fayyadamuun arraba keenya qulqulleessuu.
7. Yeroo kuduraalee asiidummaa of keessaa qaban kan akka Burtukaanaa fi Loomii nyaannee xumurru ilkaan keenya daqiiqaa dheeraadhaaf (fkn daqiiqaa 30) rigachuun nurra HIN jiraatu!
AKKAMIIN FOOLII AFAANII BADAA (HALITOSIS) ITTISNA?
Kanneen armaan gaditti tarreeffaman kun, foolii afaanii badaa ittisuuf kan nu gargaaranidha. Isaanis:-
1. Tamboo xuuxuu dhiisuu.
2. Nyaataa fi waanta mi’aa baay’ee qabu (sukkaaraa fi dhugaatii lallaafaa) nyaachuu fi dhuguu irraa of qusachuu.
3. Nyaata madaalamaa irraa soorachuu.
4. Dhugaatii nama macheessu ykn ‘Alkoolii’ dhuguu hir’isuu.
5. Buna baay’inaan dhuguu dhiisuu.
6. Bishaan bay’inaan dhuguu; kunis qulqullina afaan keessaaf waan fayyaduuf fi kkf dha.
Yaaliin foolii afaanii badaa balleessuuf/yaaluuf godhamu inni guddaan, wantoota foolii afaanii badaa fidan sana yaaluun yoo ta’u, irra caalaatti immoo qulqullina ilkaanii fi afaan keenyaa eeggachuun faayidaa guddaa qaba.
“FAYYAA TAPHA SEETEE …..!” (walaloo)
Fuula michiin dhahee
Hidhii kan dhiitessu,
Aduu barii bahee
Saafaan kan gaggabsu,
Lafa hundumaa gahee
Qaama kan madeessu,
kana hundaa utuu beektuu
Silaa wayitti hin galtuu
Gorsa iyyuu balfitee,
Suubii barii baatee
Fayyaa tapha seetee
Qayyaan laga ceete!!
Dr. Dhinsa Yonas.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa227SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← Asoosama Gabaabaa ___ DU’A DURA _ _ Kutaa 1ffaa=Wabii Xilaahuniin
WALTAJJII WALABAA AKKA MACCAAF TUULAMAA NUBARBAACHISA-Tolĕră Fiqirû Gamtă’TIIN →